Nagarik News - इलाइट क्याफे
होमपेज / नागरिक शनिबार / इलाइट क्याफे
इलाइट क्याफे	27 Apr 2013 १४ बैशाख, २०७०
विष्णु रिजाल	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
'राजुजीको क्याफे कुन हो?' उकालोमा बढिरहेको स्याँ–स्याँरोकेर सोध्दा बाटैको क्याफेमा झोक्राएर बसिरहेकी अधबैंसे महिलाले सुनेको नसुन्यै गरिन्। आफ्नो क्याफे छँदाछँदै अर्काको नाम किन सोधेको होला जस्तो गरेर उनी बोलिनन्। तर, मलाई राजु क्षेत्रीको क्याफे जानु थियो र उनले झिँजो मानेको थाहा पाए पनि फेरि सोधें– 'यहाँराजु क्षेत्रीलाई चिन्नुहुन्न? उहाँको क्याफे कता पर्छ होला?' त्यसपछि उनले बोल्दा पैसा पर्लाझैं गरिन् र औंलाले 'उः त्यही हो' भन्दै डाँडातिर देखाइन्। बाबुराम भट्टराईको नाममा दर्ता भएको 'जनादेश' साप्ताहिकमा उनी कार्यकारी सम्पादक थिए। तर, तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा 'दर्शन' का लागि अनेक प्रयत्न गर्दा राजुले पीए शाखा छिचोल्न सकेनन्। शान्ति स्तुपाको काखको डाँडामै रहेछ– द इलाइट क्याफे।द इलाइट क्याफे बाटैतिर फर्किएर आगन्तुकको स्वागतमा बसेको रहेछ। धेरै बुढ्यौली लागिनसेकको द इलाइट क्याफेमा आन्तरिक पर्यटक त्यति थिएनन्। हाम्रा दुःखी डाँडाकाँडा हेर्दै विदेशी पर्यटक आफ्नै धुनमा मग्न थिए। शान्ति स्तुपाको काखमा बसेर तिनले प्राप्त गरिरहेको फेवाको दृश्य साँच्चै अनुपम रहेछ। मैले कैयौंपटक फेवामाथि यात्रा गरेको छु, फेवालाई नजिकैबाट छुने मौका पाएको छु। तर, उसको वास्तविक रूप र आकारलाई एउटै दृश्यमा त्यसरी देख्न पाएकै थिइनँ। लामो आकारमा फैलिएको फेवा कसरी खुम्चिँदैछ र उसको आकर्षक शरीरमाथि कसरी धावा बोलिँदैछ? द इलाइट क्याफेबाहेक अन्यत्र कतैबाट त्यसरी हेर्न पाइँदैन होला।त्यसो त मैले प्रत्यक्ष रूपमा राजु क्षेत्रीलाई पनि देख्न पाएको थिइनँ। मुख्य चासो राजु क्षेत्रीका बारेमा थियो। एकपटक उनको कथाव्यथा 'जनआस्था' पत्रिकामा पढेपछि फोन गरेर अलिबेर गन्थन गरेको थिएँ। वास्तवमा त्यो कारुणिक कथा राजुले कुनै नाफाखोर चलचित्र निर्माताका लागि लेखेका थिएनन्, न त आफूलाई विज्ञापन गर्नका लागि अहिले धेरै जसो माओवादी कार्यकर्ताले लेख्ने बनिबनाउ जस्तै लाग्ने कथा नै थियो त्यो। मैले राजुका ती प्रत्येक अक्षरमा आँसु बगेको पाएको थिएँ, पीडा पोखिएको महसुस गरेको थिएँर आक्रोशको आगो बलेको भेटाएको थिएँ। सपनाहरूको हत्यामा आहत एउटा युवाले कस्तो अनुभूति गर्दछ भन्ने कुरा राजुले सरल भाषामा पोखेका थिए। कहिलेकाहीँप्रत्यक्ष देखे–भोगेका भन्दा अक्षरहरूबाट बनेका विम्बहरू साह्रै बलशाली हुन्छन् भन्ने अनुभूति मैले त्यसबाट गरेको थिएँ। राजुका सन्दर्भमा मलाई यस्तै भएको थियो। म पोखरा पुगेको बेला कुनै धर्म वा शान्तिका लागि उकालो चढेर शान्ति स्तुपा पुगेको थिइनँ। धर्मका बारेमा मेरो संक्षिप्त धारणा छ– त्यो तिनका लागि बढी जरुरी छ, जो आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै 'पाप' गरेको ठान्छन्। अनि जहाँसम्म शान्तिको कुरा छ, त्यो कुनै डाँडाका टुप्पामा पुगेर वा गुम्बा धाएर प्राप्त हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। तर, तिनै राजु क्षेत्रीले स्तुपा नजिकै क्याफे खोलेका छन् भन्ने थाहा पाएर उनलाई भेट्न पुगेको थिएँ।पोखरा मेरा लागि हरेकपटक नयाँर तन्दुरुस्त लागिरहन्छ। सायद यही गुण छोरामा पनि सरेको छ। स्कुल बिदामा पोखरा जाने ऊ र उसकी आमाको प्रस्तावभित्र फेवाताल, डेभिड फल्स, महेन्द्र गुफा, सराङकोट यस्तै–यस्तै ठाउँथिए, शान्ति स्तुपा थिएन। तर, मलाई चाहिँराजु क्षेत्री भेट्ने चाहनाले स्तुपाको उकालोतिर तानेको थियो।'जनताको मुक्तिका लागि' भनेर ज्यान हत्केलामा राखेर लडाइँमा होमिएका राजुका सपनाहरू कति वास्तविक थिए/थिएनन्? तिनको समीक्षा समयक्रममा हुँदै जाला। तर, ज्यान जोखिममा राखेर उनीहरूले युद्ध लडेको कुराचाहिँवास्तविक हो। र, आज थुप्रै हण्डर र ठक्करसँगको जम्काभेटपछि राजु क्षेत्रीले शान्ति स्तुपाको छेउमा द इलाइट क्याफे खोलेको कुरा पनि अर्को सत्य हो। राजु क्षेत्री पत्रकारिताभन्दा टाढाका मानिस होइनन्। बाबुराम भट्टराईका नाममा दर्ता भएको 'जनादेश' साप्ताहिकमा धेरै समयसम्म उनको नाम कार्यकारी सम्पादकमा झुन्डिएको थियो। तर, तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला 'दर्शन' का लागि अनेक प्रयत्न गर्दा पनि राजुले बालुवाटारको पीए शाखा छिचोल्न सकेनन्। त्यतिमात्रै त कारण होइन होला तर त्यस्तै कारणहरूको कुल योगहरूले राजुलाई आफ्नाबारे पुनःमूल्यांकन गर्नका लागि घच्घच्याएको हुनुपर्छ।राजुलाई हेर्दा लाग्छ– लडाइँलड्नु गाह्रो कुरा रहेनछ, जति त्यसको व्यवस्थापन गर्न जटिल छ। ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुभन्दा तीन महिनाअघि अर्थात् २०६१ कात्तिक २९ गते राती गजुरी ब्यारेकको घेरा तोडेर बाहिर निस्किने सात जनामध्येका एक राजुको मन त्यसै अमिलो भएको छैन। 'मुक्तिका लागि' घर, परिवार र वृद्ध मातापिता छोडेर हिँडेका राजुले नियतिको एउटा क्रूरतासँग नराम्ररी ठोक्निुपरेपछि उनलाई सहाराको सख्त जरुरत परेको थियो। १३ वर्षकी छोरी र १० वर्षका छोरामा प्रकृतिले श्रवणशक्ति हाल्न बिर्सिएछ। ती धेरैपछि भेट भएका आफ्ना मातापिताका आँखामा हेर्थे, उनीहरूलाई मुसार्थे, माया गर्थे। तर, मनका कुरा भन्न सक्दैनथे। इसारामा सन्तानसँग कुरा गर्नुपर्दाको पीडाबाट मुक्तिका लागि राजुले चिकित्सा विज्ञानको सहारा नलिई धरै भएन। प्रविधि पनि नेपाल भित्रिइसकेको अवस्थामा त राजुका लागि त्यो अनिवार्य नै भयो। शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया पनि हुने भयो। तर, समस्या उही हो– एक जनाका लागि १३ लाख नगदको जोहो † 'सर्वहाराका लागि हिँडेको' एउटा सर्वहारासँग यति धेरै रकम हुने कुरै भएन। किनभने, उनी न हिसिला यमी हुन्, न कृष्णबहादुर महरा। यही सेरोफेरोमा राजुले भोगेका दुःख पढ्दा बेचैन भएर मैले आफैं उनलाई फोन गरेको थिएँ।'यस्तै रहेछ सर'– उनले फोनमा भनेका थिए। त्यतिबेलासम्म उनको दुवै छोराछोरीको शल्यक्रिया भइसकेको थियो। संयोगले नेपालमा त्यसरी कानको अप्रेसन गर्नेमा मेरा आफन्तका दुई छोरी थिए, जो भर्खर तोते बोली सिक्दैछन्। उनीहरूका कानमा यन्त्र राखिएको छ र त्यसलाई क्रियाशील बनाउन ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्छ र पानीबाट निकै टाढा राख्नुपर्छ। उनले मन पराए/पराएनन्, तर मैले यस्तै कुरा भनेर उनलाई सान्त्वना दिन खोजेको थिएँ। 'भाइ, राजुजी हुनुहुन्न?'– मैले क्याफेकै जस्ता लाग्ने एकजना भाइसँग सोधें। एकछिन अल्मलिएर उनले दिएको जवाफ उत्साहजनक रहेन– 'राजु दाइ? राजु दाइ त हुनुहुन्न त †''कता हुनुहुन्छ त?'– नजिकै हो कि भनेर मैले सोधें। 'ए, उहाँ? उहाँत तल स्कुलतिर जानुभएको छ'– ती भाइले पनि औंलाले देखाएरै भने।र, २०६९ चैत ३० गतेको दिउसो राजु क्षेत्री द इलाइट क्याफेमा भेटिएनन्। उनी तलको स्कुलतिर गएका रहेछन्। काममा गएका मानिसलाई फोन गरी–गरी बोलाउन उचित लागेन। उनको क्याफेमा बढिरहेको सेता छालाको घनत्वलाई विचार गर्दा त्यहाँधेरै बस्न पनि उचित लागेन। भीड हेर्दा क्याफे राम्रो चलेको रहेछ जस्तो लाग्यो र हामी त्यहाँबाट बिदा भयौं।अहिले पनि राजु क्षेत्रीको आस्था बदलिएको छैन, भूमिका बदलिएको छ। हिजो सोचेका मूलभूत कुराप्रति उनी अहिले पनि त्यस्तै होलान्। तर, हिजोका सपना र आजका विपनाहरूका बीचमा रहेको खाडल भने उनलाई मन परेको छैन होला भन्ने मेरो अन्दाज छ। एउटा कुरामा राजु असाध्यै खुसी छन्– उनका छोरा र छोरी दुबैले 'आमा, बाबा' भन्न थालेका छन्। किशोरवयमा प्रवेश गर्दै गरेका तिनमा मुखबाट भर्खर तोतेबोली निस्किन लागेको छ। थाप्लोमा ऋणको भारी बोकेर राजु उकाली–ओराली गर्दैछन्।मैले लडाइँमा लागेका धेरै योद्धाका संस्मरणहरू पढेको छु, उनीहरूका कुरा सुनेको छु। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यस्ता पुस्तक लेख्ने बाढी नै आयो भन्दा फरक पर्दैन। तर, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ। त्यति नाम नसुनिएका गंगाबहादुर लामा नामक एक छापामारले लेखेका कुराले मेरो मन खुबै छोएको थियो। त्यसपछि मलाई यिनै राजु क्षेत्रीका कुराले मन दुखाए। पक्कै पनि लडाइँमा जाँदा एउटा उद्देश्य हुन्छ– जसरी पनि जित्ने। तर, जित्न नसक्दा भागमा हार पर्छ। कतिले त्यसमा ज्यान गुमाउँछन्। मार्ने वा मर्ने उद्देश्यसहित लडाइँमा होमिएकाहरूप्रति मेरो मनमा कहिल्यै पनि त्यति साह्रो सहानुभूति आउँदैन। तर, राजु क्षेत्रीजस्ता बन्दुकसँग मात्र होइन, कलमसँग पनि साइनो राख्ने आधारभूत तहका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यस दोषको भागिदार बनाउन मिल्दैन होला। किनभने, न यिनीहरूको हिजो निर्णायक ठाउँमा स्थान थियो, न आज छ, न त भोलि नै हुनेछ। यो कुरा माओवादीमा मात्र होइन, अरूमा लागू हुन्छ र भइरहेको छ। Tweet Leaveacomment Message *
नालायक मपहिलोपल्ट आफूलाई सहरिया हुलमुलबाट छुटाएर प्राकृतिक ग्रामीण धुलौटे माटोमा धुस्रोफुस्रो भएको पाएको थिएँ। मेरो गाउँ खोटाङ। काठमाडौंका बोर्डिङ स्कुलमा मीन पचासको बिदा हुने गर्थ्यो। लागेँ हजुरबुवासँग आफ्नो गाउँ हेर्ने रहर...	त्यागी सन्त प्रपन्नाचार्यशक्तिको पखेटा हुन्छ। त्यो न नेतासँग टिक्छ न स्वामीसँग। डा. स्वामी प्रपन्नाचार्य कुनै समय राजाका प्रिय थिए। शक्ति उनका वरिपरि झुम्मिन्थ्यो। जीवनको उत्तरार्धमा उनका 'अनुयायी' को भीड घट्दो थियो। तर,...	राताम्मे तुमेवा डाँडासोक्पा गाउँमा केटाकेटी गुराँसको फूल बोकेर खेलिरहेका थिए। घर नजिकैको ‰याम्म परेको रूखबाट गुराँस टिपेर उनीहरू फूल च्यात्दै शिरमा सिउरिँदै खेलिरहेका थिए। स्कुलमा पनि माला बनाएर खेल्ने गरेको उनीहरूले बताए।	विश्वकपका रमाइला तथ्यब्राजिलमा जारी विश्वकप दुई दिनपछि सकिँदैछ। त्यसपछि विश्व फुटबलको महामेलालाई चार वर्ष कुर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्दा सायद विश्वकपभन्दा युरोपेली लिगहरू रोमाञ्चक होलान्। फुटबलको नियमित दर्शकलाई त्यसैले बढी तान्ला पनि। तर...	पुनर्निर्माण चुनौती: गाउँसहर कस्तो बनाउने?काठमाडौं– सत्तामा छँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको घरमा कार्यकर्ताको भिड लागिरहन्थ्यो। उनी सबैका कुरा सुन्थे, सक्ने काम गरिदिन्थे। अहिले राजधानीको सुकेधारास्थित उनको घर प्राय सुनसान रहन्छ।...	गुराँसै फुल्यो टोड्केमाढकमक्क गुराँस !गुराँस फुलेर डाँडा राताम्मे हुँदै छन् । फूलको उज्यालोमा जीवनका गीत गुनगुनाउनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । हामीले पनि म्याग्दीको टोड्केमा गुराँसको बैंस हे¥यौं । रमायौं ।बेनीबाट जीपमा हुइँकिएको...	आफ्नो मान्छे‘तपाईं वुमन एड्भोकेट किरण शर्मा होइन! आइ नो यु। म सिर्जना कडरिया, चेयर पर्सन अफ द वुमन राइट्स एन्ड वेलफेर अर्गनाइजेसन। भेटेर खुसी लाग्यो।'	सुरक्षाको साँचोएक्लै हिँड्दा असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? राति हिँड्दा डर लाग्छ? घनिष्ठ मित्रसँग आफू भएको ठाउँको जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ बैठकमा ढिला पुगेर आलोचना सहनुपरेको छ?	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...